Booliska Mareykanka oo xabsiga dhigay Ganacsato xiriir la leh ... | Universal Somali TV
Booliska Mareykanka oo xabsiga dhigay Ganacsato xiriir la leh qareenka Donald Trump
Laba nin oo ka mid ah ganacsatada gobolka Florida oo xiriir la leh qareenka madaxweyne Donald Trump, mr Rudy Giuliani ayaa loo xiray eedo maalgalin aan sharci aheyn oo dhanka Ololaha,sida uu sheegay afhayeenka xafiiska xeer Ilaaliyaha Guud.
Ganacsatade Lev Parnas iyo Igor Fruman, ayaa loo xiray iyada oo lagu heesto maalgalin sharci daro ah oo la xiriirta olole siyaasadeed oo ka dhacay gobolka Newyork, sidaasi waxaa lagu yiri warbixin Khamiista maanta ah laga soo saaray xafiiska xeer ilaalinta ee degmada Manhattan.
Labada nin ayaa markii la xirayay qorsheynayay in ay u duulaan habeenimadii xalay magaalada Vienna ee dalka Austria sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dowlada Mareykanka.
Mr Parnas ayaa ah ganacsade u dhashay Ukrain halka Fruman uu yahay ganacsade maalgaliya guryaha. waxaana lagu tuhmayaa in ay qeyb ka yihiin fadeexada hareysay dowlada Mareykanka oo ku aadan in caawinaad ay weydiisatay Ukraine.
Xarigaan ayaa imaanaya iyadoo aqalka hoose ee Congress-ka uu wado baaritaano la xiriira madaxweyne Donald Trump oo caawinaad weydiistay dal Ajnabi ah si baaritaan loogu sameeyo mid ka mid ah madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka.
Trump ayaa hadii ay ku cadaato fadeexadaan waxaa uu ka waayi karaa xilka sida ay sheegtay afhayeenka aqalka hoose ee Congress-ka.
Kan-xigaDowlada oo u yeertay safiirka Kenya u...
Kan-horeFarmaajo iyo Abiye oo kulan Muhiim ah...
50,574,494 unique visits